Miady ho amin’ny fahamarinana ny mpanao gazety raha mbola mitohy ny fandrahonana any Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Manasongadina ny herisetra mahazo ny mpanao gazety any Kolombia ilay horonantsary fanadihadiana
Voadika ny 04 Marsa 2020 3:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Nederlands, Ελληνικά, English
Ny tranga nihatra tamin'ny mpanao gazety Kolombiana Jineth Bedoya, Edison Molina, ary Guillermo Cano, notaterin'ny lahatsary niara-notontosain'ny IFEX sy FLIP. Sary nataon'ny Global Voices.
Ratsy laza amin'ny tranga mahatsiravina mihatra amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona ao aminy i Kolombia. Ohatra, tamin'ny taona 2019 dia mpikatroka mihoatra ny 107 no nisy namono. Saingy mihatra amin'ireo mpanao gazety ihany koa ny valiny mahery vaika noho ny fanadihadiana atao amin'ny kolikoly sy ny fihoaram-pefy hafa.
Nanambara ny mpitantara tamin'ny horonantsary vao haingana novokarin'ny tambajotra eran-tany manandratra ny fahalalaham-pitenenana, IFEX, sy ny mpiara-miasa aminy eo an-toerana, Fundación para la Libertad de Prensa fa “voarahona ny fiarahamonina iray manontolo rehefa ampanginina ny mpanao gazety.” Raha tsy nisy ny asa fanaovan-gazety dia tsy afaka hahazo ny vaovao ilaina ny olona hamolavolana hevitra feno sy handraisana anjara amin'ny fiarahamonina.
Mitantara ny tantaran'ny mpanao gazety miisa telo izay voatafika tany Kolombia ny horonantsary fanadihadiana fohy maharitra 10 minitra latsaka: roa no maty fa velona kosa ny iray ary nitantara ny nahazo azy.
Araka ny filazan'ny IFEX, mpanao gazety miisa 15 no maty tany Kolombia noho ny antony nifandraika tamin'ny asan'izy ireo teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2019 ary nahazo fandrahonana ny 942 tamin'izy ireo. Hafa ny tarehimarika ho an'ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety (CPJ) satria tokony ho valo ireo mpanao gazety miisa novonoina tamin'io fotoana io. Na izany na tsy izany anefa, misy fiantraikany lehibe ny herisetra natao tamin'ny mpanao gazety: mandrahona sy mampangina ny hafa amin'ny asany izany.
Nisy ny fandrahonana ireo mpanao gazety tato ho ato. Tamin'ny volana Febroary 2020, naharay taratasy mampilaza ny fisamborana azy ilay mpanao gazety Edison Lucio Torres noho ny tsy nanalany ireo lahatsoratra navoakany izay nanambara ny toe-bola sy ny fomba fiainan'ny pasitera iray teo an-toerana. Ilay pasitera, izay nametraka fitoriana an'ilay mpanao gazety noho ny ‘fanalana baraka azy’ dia nandrahona ampahibemaso an'i Edison Luis Torres nandritra ny fotoam-pivavahana telo taona lasa izay.
Nanao fanairana ihany koa ny mpanao gazety hafa tany Kolombia toa an'i Daniel Coronell taorian'ny nahazoany fandrahonana.
Jineth Bedoya Lima miaraka amin'i Hillary Rodham Clinton sy Michelle Obama nandritra ny fizarana Loka Iraisam-pirenena ho an'ny Herimpon'ny Vehivavy (IWOC) tamin'ny taona 2012. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons.
Nalaina an-keriny, nampijaliana ary nanaovana herisetra ara-nofo tamin'ny taona 2000 i Jineth Bedoya, iray amin'ireo mpanao gazety nohadihadian'ny IFEX sy FLI rehefa nitatitra momba ny raharaha fanondranana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna izy. Tany am-piandohan'ny taona, nalain'ny Tafika Revolisionera ao Kolombia (FARC) izy ary navotsotra taty aoriana.
Folo taona taorian'ny nangalana an-keriny azy tamin'ny taona 2000, nitondra ny raharahany tany amin'ny Komity Iraisan'ny Amerikana misahana ny Zon'olombelona (IACHR) an'ny OAS i Bedoya. Nanomboka teo, lehilahy milisy maro no voaheloka noho ny fandrahonana.
Tamin'ny volana Jolay 2019, nanaovan'ny IACHR fehinteny fa tsy nandray ny fepetra nifanaraka tamin'ny raharahan'i Bedoya ny Fanjakana Kolombiana ary hitory an'i Kolombia any amin'ny Fitsarana noho izany izy ireo. “Mampiseho hirika ara-tantara izany fa afaka manao izany ho maodely ny Fitsarana Iraisan'ny Amerikana misahana ny Zon'Olombelona miady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy mpanao gazety sy ny adidin'ny fanjakana amin'ny fiarovana ary koa ny fisorohana sy ny fanadihadiana ny heloka bevava toy izany,” hoy ny IFEX nanoratra.
Tao amin'ny lahatsary notontosain'ny IFEX, nanazava ny fitiavany ny asa fanoratan-gazety i Bedoya :
Ny asa fanoratan-gazety no tena namonjy ny fiainako, izany no mampavitrika ahy isan'andro. [Ny asa fanoratan-gazety], tamin'ny fotoana iray, no namonjy ahy tsy hamono tena. [Ny asa fanaovan-gazety] no nahatonga ahy hanohy hiatrika ireo fandrahonana izay tsy maintsy atrehako anio. [Ny asa fanaovan-gazety] no nanosika ahy hiady ho amin'ny fahamarinana sy nitondrako izany ho any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena.